GNOME 40.2 inouya pamwe nekugovana screen pamwe nekumwe kugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Ini ndiri mushandisi akatendeka we KDE software. Ini ndiri akatendeka nekuti ini ndinoshandisa pane yangu huru laptop, pane iyo ine simba shoma kubva kwandiri kunyora ichi chinyorwa uye pane desktop desktop yandinoshandisa pane Raspberry Pi, asi munguva pfupi yapfuura yakayambuka pfungwa dzangu kurega kuva izvo mushure mekuyedza iyo v40 kubva padhesiki rakakurumbira. Aya matsva anokwezva kutarisisa, asi makambani akaita seCanonical kana Manjaro haana kuitora panguva iyoyo nekuti zvese zvaive zvisina kukura Nhasi, chirongwa chakatangwa GNOME 40.2 kuita kuti zvinhu zvive nani.
Uye kwete, hazvisi izvo kuti GNOME yakaita basa rakaipa neiyi yekuvandudza; dambudziko nderekuti kuwedzeredzwa kwakawanda kwanga kusiri kushanda, uye GTK4 yakanga yaburitswawo nguva pfupi yapfuura, saka hazvisi zvese zvaienderana. Manjaro yakagadzirira uye ichaita kuti iwanikwe kune Stable vashandisi munguva pfupi, nepo avo vanosarudza Fedora vachizotora mukana weiyo tweaks yakaunzwa muGNOME 40.2 pakaburitswa mapakeji matsva.
1 Pfungwa dzeGNOME 40.2
2 Inowanikwa izvozvi, munguva pfupi mukugovera kwako ... kana usinga shandisa Ubuntu
Pfungwa dzeGNOME 40.2
Sezvatinoverenga mu chinja runyorwa, GNOME 40.2 inounza maficha matsva seaya:
Kunatsiridzwa mukubatanidzwa kwetactile kwezviito mugridhi yeapp.
Kujekesa kunatsiridza pachiyero chepakati.
Yakagadziridzwa nzvimbo yekushandira chiratidzo paMabasa minimap.
Kuvandudzwa kweminwe yeminwe.
Tsigiro yemashure ehupenyu akagadziridzwa kuburikidza neiyo Wallpaper portal.
Yakagadziridzwa mashandiro panguva yeChiedza Chiedza shanduko paNVIDIA GPUs.
Tsigiro yemet.no mamiriro ekunze ekuzivisa mupi muGNOME Calendar.
Kugona kwekuona kwe SMART hunhu pane GNOME Disks kuti iwedzere kutenderera.
Kugona kweiyo GNOME Kugadziridza daemon kuverenga / dev / rfkill pane nyowani tsanga,
Iwe unogona ikozvino kumhan'arira chaiyo bhatiri muzana kana izere.
Iyo GNOME Software Center yakagadziridzwa muzvinhu zvakaita sekuti ikozvino inouya nerutsigiro rwuri nani rwePlppak kunyorera.
Yakagadziridzwa otomatiki kurodha pasi yezvakamirira kugadziridzwa.
Kugadziridzwa kune iyo Adwaita icon theme.
Kugadziriswa kweEpiphany ndangariro nyaya uye GNOME Calendar.
Tsigiro yakawedzerwa iyo RAR v5 mafomati mafomati.
Yakagadziriswa nyaya uko GDM yaive ichimhanya 100% CPU pakutanga, uye zvakafanana nenyaya yakafanana muGedit.
Inowanikwa izvozvi, munguva pfupi mukugovera kwako ... kana usinga shandisa Ubuntu
GNOME 40.2 yakatangwa zviri pamutemo, saka yatove mumaoko emunhu chero upi zvake anoda kuitora. Dambudziko nderekuti kugoverwa kukuru kwave kuda kumirira, saka nzira dzakanakisa dzekuyedza nekukurumidza nekushandisa Fedora kana Rolling Release masisitimu seArch Linux kana Manjaro pabazi ravo risingagadzike. Vashandisi veUbuntu vanofanirwa kumirira kwenguva yakati rebei, kusvika Gumiguru, uye vangangoita kusvetuka vakananga kuGNOME 41
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GNOME 40.2 inouya pamwe nekugovana screen pamwe nekumwe kugadzirisa